Waa Kuma Wasiirka Ugu Horreya Ee Ay Saameyn Doonto Isku Shaandheynta Kheyre (Sir+ Shaqsiga Lagu Baddali Doono) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Waa Kuma Wasiirka Ugu Horreya Ee Ay Saameyn Doonto Isku Shaandheynta Kheyre...
Haddii dhawaan ay xukuumadda ra’iisul wasaare Kheyrre ka badbaaddo mooshinka lala maleegayo, waxaa la filayaa in isku shaandheyn lagu sameyn doono golaha wasiirrada xukuumadda Soomaaliya.
Warar hoose oo ay shabakadda Shaaciye helayso ayaa sheegaya in qaar kamid ah wasiirrada golaha Kheyrre ay wayn karaan booskooda, halka siyaasiyiin kalana fursad ay u heli doonaan kasoo muuqashada masraxa siyaasadda Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar ayaa kamid ah shakhsiyaadka bartilmaameedka ah, waxa aan laga yaabaa in ay marto seefta Kheyrre, oo galka laga bixin doono dhammaadka Bishaan ilaa bilaw dhexaadka bisha August ee soo aaddan.
C/raxmaan Cabdishakuur Warsame, oo horay usoo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo badinayaa in uu qabto xilka wasiirka arrimaha dibadda haddii ay dabeesha isku shaandheynta qaaddo Yuusuf Garaad Cumar.
Ra’iisul wasaarre Kheyrre ayaa horaan madax waynaha ugu soo bandhigay suurta galnimada ah in C/shakuur la siiyo wasiirka ay reerkiisu leeyihiin, hasa yeeshee madaxwayne Farmaajo oo u arkayay in uu lug iyo galaan gal siyaasadeed oo mugleh uu ku lahaa dawladihii hore ayaa diidmo qayaxan ku qaadacay aragtidaas, waana sababta Yuusuf uu xilligaas ku helay fursadda wasiirka arrimaha dibadda.